fanontaniana sambo ...
2 taona 8 volana lasa izay #197 by PAYSON
Azo antoka fa te hahita mpandeha fiaramanidina WWII iray na roa.
2 taona 8 volana lasa izay #198 by Gh0stRider203
Fantatro fa tsy olona ratsy saina izany!
2 taona 8 volana lasa izay #202 by PAYSON
Inona re no tsy tokony ho tiana? Marina ve aho? 1 na 2 WWII mpitatitra entana. Aza diso aho, tiako slammin 'amin'ny fatiantoka azontsika izao, fa kely loatra izany miaraka amin'i Corsair farany (na dia tsy fiaramanidina WWII aza dia nampiasa ihany koa izy ireo). Ny farany amin'ny fiaramanidina mpitatitra dia mpitsikilo. Mazava ho azy fa manana saka manokana ao am-poko ny saka rehetra Grumman. Manana aho fsx dikan-javatra toa ny bitchin 'WWII fisaka ambony, tsy afaka mamantatra ny fomba fametrahana azy io. Tsy manana mitovy amin'ilay Rikooo installer mitovy. Mila mihazakazaka, (ara-bakiteny, manao joggin vitsivitsy)
Miverina amin'ny rahona, PAYSON
2 taona 8 volana lasa izay #207 by Gh0stRider203
Tsy afaka nifanaraka bebe kokoa aho. Miezaha foana hahay hitandre ireo zavatra araka ny azo atao
Amiko marina dia tsy hahalala ny fomba fametrahana izany fiaramanidina izany raha tsy manana ny rakitra eo anoloako. Azoko atao fotsiny ny mihevitra fa hametraka izany amin'ny fisie scenery izy io, ary raha tsy ampidirina fotsiny FSX, ampidiro an-tserasera amin'ny manual ...